Realme dia manambara Watch S Pro, Watch S Master Edition ary Buds Air Pro Master Edition | Androidsis
Realme dia nanambara ora vitsivitsy lasa izay vokatra telo vaovao ho an'ny katalaogy 2020Ireo rehetra alohan'ny faran'ny taona 2020. Ny mpanamboatra malaza dia mampiseho famantaranandro sy sofina vaovao roa natokana ho an'ireo mpampiasa izay mitaky feo tsara indrindra amin'ny sandam-bola tsara indrindra.
Ny orinasa dia manolotra ny Realme Watch S Pro, Watch S Master Edition ary Buds Air Pro Master Edition any Azia, firenena izay ahatongavany voalohany nefa am-pieritreretana fa ho tonga amin'ny kaontinanta iray manontolo izy ireo. Ny voalohany amin'izy ireo dia famantaranandro vaovao, ny faharoa fanontana manokana an'ny Watch S ary ny fahatelo fanontana hafa an'ny Buds Air Pro.
El Realme Watch S Pro Izy io dia miasa miaraka amin'ny processeur ARM Cortex-M4, mametraka ny efijery AMOLED 1,39-inch miaraka amin'ny vahaolana 454 × 454 teboka miaraka amin'ny famirapiratany mandeha ho azy. Ny famantaranandro dia manohana dial 100 eo ho eo, azo atakalo avokoa izy rehetra avy amin'ilay mpampiasa ary azonao atao ny misafidy ny mampakatra ny sarinao avy amin'ny telefaona.
Ny Realme Watch S Pro dia vita amin'ny vy vy SUS316L, manana maody fanatanjahan-tena hatramin'ny 15, fandrefesana ôksizenà ra SpO2, fanaraha-maso ny tahan'ny fo ary fanaraha-maso torimaso. Ny fanoherana ny rano dia 5 ATM ary ny interface dia tompon'ny Realme.
Eo amin'ny lafiny fifandraisana, ity famantaranandro vaovao ity dia miaraka amin'ny Bluetooth 5.0 ho an'ny fifandraisana haingana kokoa ary tsy manana ny GPS, tena ilaina rehefa miresaka ny marina. 420 mAh ny bateria, maharitra maharitra 14 andro eo ho eo amin'ny fampiasana antonony, raha toa ka 7 andro eo ho eo ny faharetan'ny faharetan'ny fampiasana.
Manampia fampandrenesana tsy miasa ary fampahatsiahivana fisotroana. Izy io koa dia miaraka amin'ny fampandrenesana marani-tsaina, fanairana amin'ny alàlan'ny antso ary fifehezana fakan-tsary sy mozika. Izy io dia iray amin'ireo fiambenana misy safidy maro izay mampiavaka azy amin'ireo eny an-tsena.
Realme Watch S Pro dia tonga tamina safidy silicone ary hoditra vegan amin'ny loko efatra: maitso, volontany, manga sy mainty. Ny lanjan'ity fiambenana ara-panatanjahantena ity dia 63,5 grama. Ny vidin'ny famantaranandro dia 135 dolara, manodidina ny 110 euro hanovana.
El Realme Watch S Master Edition dia noforonin'ny mpanakanto Koreana fanta-daza Grafflex, mizara ireo fiasa mitovy amin'ny Realme Watch S. Izy io dia miaraka amina fehin-kibo manokana, tarehy fiambenana ary boaty iray izay misy sticker mifamatotra.
Realme Watch S Master Edition Tonga any India tsy ho ela izy amin'ny vidiny INR 5,999 (eo amin'ny 65 euro eo ho eo ny fiovana) amin'ny safidy telo samy hafa: volomboasary, manga sy maintso. Ankoatr'izay, ny Watch S Master Edition dia tonga amin'ny safidy hafa: volontsôkôlà, mainty, manga sy maitso.
Fampandrenesana an-tsarimihetsika an'ny Realme Buds Air Pro Master Edition José Levy no namolavola azy, ilay mpamorona ny Buds Air Q, mpamaky headphone iray izay nahomby tokoa. Mizara toetra mitovy amin'ny modely Buds Air Pro izy ireo, tonga amin'ny loko Silver New Wave miaraka amin'ny tendron'ny sofina amin'ny loko mainty.
Ireto headphone TWS ireto dia vidin'ny INR 4,999 (55 euro amin'ny fanovana) ary hamidy amin'ny 8 Janoary 2021 any Shina, hahatratra ny faritra hafa amin'izao tontolo izao mandritra ny enim-bolana voalohany. Hanatratra ny maodely navoakan'ny mpamokatra fanta-daza hafa izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Realme dia manambara ny Watch S Pro, Watch S Master Edition ary ny Buds Air Pro Master Edition
Samsung dia manokatra ny programa beta an'ny One UI 3.0 mankany amin'ny Galaxy A sy M
Ahoana ny fomba fitehirizana angona finday amin'ny Google Chrome